Libanona: Fanontaniana Azo Ambara Ho Tsy Politika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Oktobra 2018 16:07 GMT
Inona no hanintsika? Nahoana ireo bankintsika no miroborobo? Iza no mandraoka an'ireo baomba miparitadritaka? Ahoana no hanampian'i Brezila amin'ny fanodinana ireo fako libaney? Nankaiza ireo ankizy izay voafandrika teny anelanelan'ireo tifitry ny andaniny sy ankilany nateraky ny ady? Ary mozika kely koa. Ireo no fanontaniana vitsivitsy izay ahitàna valiny any anatin'ny fijerena ny tontolombolongana libaney tamin'ity herinandro ity. Ndeha atombontsika amin'ireo fanontaniana telo momba ny fisiana napetrak'i Mazen Kerbaj [En]. Ao anatin'ny asa eto ambany, manontany izy manao hoe “Iza isika? Iza no mahalala? Iza no hameno ny banga?”
Manana ny blaogera Prof Rami Zurayk |En] ihany koa isika, izay manomboka ny iray amin'ireo lahatsorany mitondra ny lohateny hoe “Oh Ry Libanezy, raha toa ka mba fantatrao mantsy izay arapakareo!” avy amin'ny taratasy iray nosoratan'i Antoine Howayyek, lehiben'ny fikambanan'ireo mpitrandraka fambolena Libanezy, nalefa tany amin'ireo minisitra sasantsasany ao amin'ny governemanta Libanezy, mangataka azy ireo hoe:
Nahoana no tsy mba misy fenitra sy fanarahamaso ny kalitaon'ireo sakafo nafarana: ireo voankazo, ireo legioma, ny ronono sy ireo vokatra avy amin'ny ronono? Nahoana izy no tsy manao ny asany ny minisitra ary tsy mandray andraikitra, na tsy mampiandraikitra, ny fanarahamaso ny kalitao avy any amin'ireo sisintany ?
Manainga fanontaniana maro mikasika ny varotra, ny fambolena ary ny vokatra eto an-toerana ilay taratasy voalaza eto ambany. Iray amin'ireo olana ny:
Tsy misy fomba hahalalana ny fiavian'ireo vokatra amidy eny amin'ny tsena Libaney. Nafarana avokoa ny ankamaroan'ireo vokatra ary dia amidy sahala amin'ireo vokatra Libaney anefa. Isantaona, 5 000 taonina ny fromazy fotsy nafarana sy namidy ho toy ny fromazy Libaney. Ireo lalàna Libaney mitaky fa tokony amidy miaraka amin'ny fonony niaviany ireo vokatra.
Rehefa avy naneho hevitra tamin'ny vontoatin'ny taratasy, namintina toy izao ny Profesora Zurayk:
Ny fanohanana ny vokatra vita eto an-toerana amin'ny alalan'ny famantarana ny niaviany no mety ho dingana voalohany mankamina zavatra tena manan-danja indrindra, sahala amin'ny masontsivan'ny kalitao. Alaivo sary an-tsaina fotsiny raha toa isika handray fepetra hanisy soratra famantarana mazava tsara an'ireo karazan-tsakafo izay misy singa mpanorina nasiam-panovàna. Fahafatesana ho an'ireo serealy amerikana izany, ny sakafo maika amerikana, ny menaka soza sy ireo vatomamy amerikana. Ny ankamaroan'ny lazambidintsika amin'ny fanafarana sakafo. Mazava ho azy, tsy ho faly VELIVELY ireo amerikana tompomenakely, sa tsy izany ?
Ireo baomba miparitadritaka tsy nipoaka, nalefan'i Isiraely tao Libanona nandritra ny ady tamin'ny taona lasa, dia sakana ihany koa ho an'ny famokarana fambolena sy ny sakafo any amin'ny faritra atsimo. Tsy tokny ho adino fa ireo baomba madinika tsy nipoaka ireo hatramin'izao dia namono na nandratra olona 239 hatramin'ny namoahana ny fampitsaharana ny ady. Miresaka sarimihetsika iray ilay blaogera Libaney [En] izay mampiseho an'ireo mpilatsaka antsitrapo sasantsasany, miasa amin'ny fanalàna an'ireo vanja milevina, mba hanehoana ireo endrika sy ireo tantaran'ny fiainana any ambadik'ireo antontanisa sy ireo tarehimarika.
Aseho antsika koa i Muhammed Nahle, mpilatsaka antsitrapo avy amin'ny fiarovana sivily Libaney, izay tsy maintsy notapahana tongotra taorian'ny faharatrany vokatry ny baomba miparitadritaka, ny andro farany tamin'ny ady. Ny hamafisan-tsainy, na teo aza ireo ratra, dia ohatra iray: ireny olona ireny no mahery fo, izay mitohy voapoizin'ny vokatr'ireo ady tamin'ny taona lasa foana ny fiainany isanandro. Izy ireo no endrika sy tantaran'ny fiainana any ambadik'ireo antontanisa sy ireo tarehimarika henontsika.
Manamarika ny tatitra isan-kerinandro avy amin'ny banky libaney goavana iray fa nahitana fitomboana 4% tamin'ny taona 2005 ary 6% tamin'ny taona 2006, ny fametrahambolan'ireo mpanjifa. Io, na nisy aza ny korontana politika sy ny zava-mampanahy betsak dia betsaka eo amin'ny firenena. Io lahatsoratra io, navoakan'i Bech teo amin'ny tambajotra teo amin'ny blaogy Remarkz [En], dia manome fanazavana iray momba io trangan-javatra io:
Lazaiko tsotra fotsiny fa ireo mametraka ny volany ao anatin'ny toekarena libaney, ny tiako ho lazaina dia ireo izay tena mampisy fahasamihafàna, dia manana antoka politika sy ao anatinà tambajotra iray ihany. Sahala amin'ny toa, ao anatin'ny sehatra fampindramambola (ary tsipihako, fa ny sehatra fampindramambola irery ihany) dia misy rafitra iray mafy sady marin-toerana. Rafitra iray izay misarika mpandray anjara vitsy nefa be vola misehatra ao, tsy misy ifandraisany amin'ny ambiny ao anatin'ny toekarena libaney. Satria rehefa dinihana, tsy ny toekarena libaney amin'ny maha-izy azy no fototry ny olana, fa ny toekarena foronin0ny eritreritra nifototra tamin'ny fitokisana, natsangan'ny rafitra ara-bola an'ny fanjakàna natao tantely afa-drakotra, tsentsefin'ireo banky kamo eo an-toerana, izay, raha toa izy ireo ka tsy afaka mampanjanaka ny volany ao anatin'ireo kaonty fametrahambola, amina zanabola raikitra, dia hampanjana-bola any ivelan'i Libanona. Nahoana ny ady no hanakorontana rafitra iray tahaka izany?
Hanampy an'i Libanona i Brezila hanodina ny fakony, ary anisany manokana amin'izany ireo korontam-bato tamin'ireo tranobe rava sy potika. Ho ampiasaina ho toy ny akoram-pamokarana izy ireny amin'ny fanorenana an'ireo làlana sy ireo trano, araka ny voalazan'ny lahatsoratra iray navoaka tao amin'ny blaogy Tears for Lebanon.[fanamarihana: efa maty ity bilaogy ity]
Ny sarin'ireo ankizy palestiniana, nandositra ny tobin'i Nahr al Bared, toerana ifandonan'ny tafika Libaney tamin'ireo milisin'i Fatha al Islam, no lohahevitra iray amin'ny lahatsoratr'i Golanlya [En]. Manao blaogy mikasika an'ireo ankizy irakiàna ihany koa izy, izay niharan'ireo fitondrana tsy araka ny maha olona sy efa ho fatin'ny hanohanana tao anatin'ny iray amin'ireo toerana fitaizana zaza kamboty ao Iràka, tamin'ny herinandro lasa teo.
Ndeha ho fintinintsika amin'ny mozika ny fijerena an'ireo blaogy tamin'ity herinandro ity. Ziad El Ahmadie [tapaka ny rohy] dia mpamorona, mpihira sy mpilalao ny oud libaney. Atambatry ny asany ireo karazana fitaovana fanaovana mozika sy ireo gadona isankarazany. Afaka trohana ao amin'ny bilaoginy vaovao ny santionany amin'ireo asa famoronany.
Izay ny mikasika an'ity herinandro ity. Mirary soa ho anareo.